Saxaafadda Talyaaniga oo kashiftay arrin xasaasi ah oo lagala hadlay Axmed Madoobe (Kulan qarsoodi ah oo uu la yeeshay Fahad Yaasiin) | Hadalsame Media
Home Wararka Saxaafadda Talyaaniga oo kashiftay arrin xasaasi ah oo lagala hadlay Axmed Madoobe...
Saxaafadda Talyaaniga oo kashiftay arrin xasaasi ah oo lagala hadlay Axmed Madoobe (Kulan qarsoodi ah oo uu la yeeshay Fahad Yaasiin)
(Kismaayo) 12 Maajo 2020 – Saxaafadda Talyaaniga oo beryahan markale diiradda ku haysa Somalia oo ay ka hadal hayso sii daynta Silvia Romano, ayaa kashiftay arrin kale oo xam xam mooyee aan si rasmi ah loo shaacinin.
Idaacadda Radio Radicale ayaa faafiyey in Agaasimaha Sirdoonka Qaranka (NISA) ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu duullimaad qarsoodi ah ku tegey magaalada Kismaayo oo xarun KMG ah u ah Maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland.
Idaacadda ayaa tegitaanka Fahad Yaasiin oo dhacay 10 maalmood kahor ku sheegtay inuu salka ku hayo in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka MW DF Somalia ee Farmaajo iyo Axmed Madoobe.
DF Somalia ayaa diiddey inay sharciyayso doorasho uu Axmed kaligii agaasimey oo bishii Agoosto ee sanadkii hore Kismaayo, taasoo ”lagu xushay” markii 3-aad oo xiriir ah, tiiyoo ay Dastuur goboleedka ku qoran tahay 2 muddo xileed, isagoo taageero qadcan ah ka helaya Dowladda Kenya, sida ay Idaacaddu sheegtay.
Yeelkeede, wuxuu Fahad Yaasiin sidoo kale booqashadaa Axmed kula soo qaaday sidii gacan uga gaysan lahaa sidii loo sii dayn lahaa Silvia Romano, taasoo markaa kaddib loo dhaadhiciyey dhanka Afgooye oo Muqdisho u dhow.
Idaacaddu ma sharrixin sababta loogu baahday in Axmed Madoobe lagala hadlo sii daynta gabadhan iyo saamaynta uu arrintan ku lahaa.
Previous articleSida ay Fahad Yaasiin, Mire Indha-Yare, Turkiga & Qadar ay gacan uga gaysteen soo daynta Silvia Romano oo la kashifay
Next articleTurkiga oo Imaaraadka ku eedeeyey inuu qas ka wado dalal ay Somalia ku jirto